एनआरएनए क्षेत्रीय उम्मेदवारमा कुन क्षेत्रका को ? :: NepalPlus
एनआरएनए क्षेत्रीय उम्मेदवारमा कुन क्षेत्रका को ?
नेपालप्लस संवाददाता काठमाडौं२०७८ फागुन २७ गते १८:२८
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी निर्वाचनकालागि सबै क्षेत्रबाट केहि पदबाहेक सबैमा उम्मेदवारी परेको छ । धेरै पदमा निर्बिरोध हुने देखिएको छ । केहि पदमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ ।
अमेरिका क्षेत्रीय संयोजकमा प्रकाश सापकोटा छन् । त्यस्तै उपक्षेत्रीय संयोजकमा अभिमन्यु बस्नेत र पुरुषोत्तम बोहरा छन् । महिला संयोजक तृष्णा शर्मा, महिला उपसंयोजक इन्दिरा त्रिपाठी, युवा संयोजक स्वरस खाती, युवा उपसंयोजक ईश्वर खत्री छन् ।
त्यस्तै, अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक राजकुमार थापा छन् । क्षेत्रीय उपसंयोजकमा आरपी पन्त, महिला संयोजक केशना लिम्बु छन् ।
त्यसैगरि, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय संयोजकमा पारस पोखरेल छन् । क्षेत्रीय उपसंयोजकमा नवीन बिके, डडैवाल खड्का र हरि भट्टराईको उम्मेदवारी परेको छ । महिला संयोजकमा शान्ति अधिकारी, महिला उपसंयोजक इन्दिरा तिवारी, युवा संयोजक दीपक कँडेल छन् ।
युरोप क्षेत्रीय संयोजकमा सन्तोष भट्टराई निर्बिरोध हुने देखिएको छ । क्षेत्रीय उपसंयोजकमा चित्र सुवेदी, नवराज रोजियारा, सागर सुवेदी र ललित न्यौपानेको उम्मेदवारी परेको छ । महिला संयोजकमा पार्वती मल्ल, महिला उपसंयोजक नुनिता सापकोटा, युवा संयोजक किरण गुरुङ र युवा उपसंयोजकमा रोबर्ट लिम्बु छन् ।
मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोजकमा जोन अर्याल छन् । क्षेत्रीय उपसंयोजक अमित चाम्लिङ र लालबहादुर पुनको उम्मेदवारी परेको छ ।
ओशिनिया क्षेत्रीय संयोजकमा लाल केसी, दिनेश जोशी र दिपक शर्माको उम्मेदवारी परेको छ ।
क्षेत्रीय उपसंयोजक रामराज ओली, अशोक केसी, महिला संयोजक उषाकिरण बानियाँ र युवा संयोजक प्रदीप रुपाखेती भएको बताइएको छ । तर यि पछिल्ला पदका बारेमा भने नेपालप्लसले पुष्टि गर्न सकेन ।
आगामी निर्वाचनकालागि एनआरएनए निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्ताको म्याद शुक्रवार नेपालको समय अनुसार अपरान्ह पाँच बजेसम्मकालागि तोकेको थियो । एनआरएनएको आगामी नेत्रित्वकालागि मार्च २२ र २३ मा अनलाईनबाट मतदान हुने कार्यतालिका तोकिएको छ ।